1. Unyawo oluncinci njengoko igama lisitsho, itafile yokusonga yitafile enokusongwa. Eli lelona phawu lusisiseko loyilo lwetafile yokusonga. Ukuba indawo ekhayeni lakho ilinganiselwe, akunjalo? Iitafile ezisongelayo ziluncedo kuwe, zivule xa uzifuna, zisonge xa ​​ungadingi ...
Kholelwa ekunyukeni okuzinzileyo kuthutho lwaselwandle ngeli xesha ukuvumela amashishini amaninzi ahambelanayo, hayi amaxabiso kuphela, kunye netanki kunzima ukuyifumana, kwaye ukukhankanya ukungabinanto kuye kwaba nzima ngakumbi, kuba ngaphambi kohlengahlengiso lomthamo, kukhokelela kwinani elikhulu lesetyhula umthamo awonelanga, kwimeko ...
Ngokubuyiselwa koqoqosho olukhulu kunye nokwanda kwenqanaba lokungena kwe-e-yorhwebo, intengiso yefenitshala yangaphandle yaseTshayina iya isanda ngokuthandwa. Ingxelo esanda kukhutshwa yokubeka iliso kwiziko lase China lophando lwedatha ibonisa ukuba kwisiqingatha sokuqala salo nyaka, i-transac ...
Iimpawu zemidlalo zangaphandle zikhawulezisa isantya sobume base China
Ngokubuyiselwa koqoqosho olukhulu kunye nokwanda kwenqanaba lokungena kwe-e-commerce, intengiso yase China yorhwebo iyanda. Ingxelo esanda kukhutshwa yokubeka iliso e-China E-Commerce Research Centre ibonisa ukuba kwisiqingatha sokuqala salo nyaka, intengiselwano ...